Dhaqaatiirta caalamka oo la yaaban sababta Feyruska Corona uusan ugu dhicin carruur badan
Mogadishu - 22:50:17
Sunday March 15, 2020 - 22:41:20 in Wararka by Super Admin
Waxyaabaha la yaabka leh ee ay dhaqaatiirta caafimaadka adduunku ay illaa iyo haatan la yaabban yihiin ayaa ah sababta Feyruska Corona (COVID-19) uusan u soo ridan carruur fara badan, tan kale oo ka sii daranna waxay tahay sababta carruurtu aysan aad ugu xanuunsan feyruskan.
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in waddanka Shiinaha oo ah halka ugu badan ee uu sida ba’an ugu fiday COVID-19 laga diiwaan geliyay in keliya 2.4% oo carruur ah uu ku dhacay, isla markaana 0.2% oo keliya ay aad ugu xanuunsadeen, dhimashadooduna aysan badneyn marka loo eego dadka waaweyn.
Dadka uu aadka u rafaadiyo Coronavirus waxaa daraasad Shiineysku sameeyeen ay ku sheegeen inay yihiin 80 jirrada, kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay 21.9%, halka kuwa da’doodu u dhexeyso 10 sano illaa 39 sanadoodna ay ka dhigan tahay 0.2%.
Baarayaasha caafimaadka ayaa waxay arrintani ka barteen in Feyruskan (COVID-19) uusan si isku mid ah u waxyeeleen dadka, balse laga fahmay in cudurkani uusan dadkoo dhan sariir yaal ka dhigin, balse xagga da'da lagu kala duwan yahay.
Waxay kaloo culimadu sheegeen in Sambabada dadka waaweyn ay ka dhigan tahay in muddo dheer ay soo isticmaalayeen halka carruurta yarna uu sambabkoodu cusub yahay, taasoo Feyruskuna isku si uusan unugyadooda jirka u dili karin.
Waxaa kale oo jirta in ilmo yar oo markaa dhashay Shiinaha oo qabay Coronavirus uu ka bad baaday, taasoo yaab kale ku noqotay dhaqaatiirta.
Dhanka kale Feyruskii kale ee SARS ee 2002 ka dillaacay caalamka oo ay ku dhinteen 744 qofood ayaanan wax carruur ah ku jirin inta u dhimatay, waloow Feyruskii kale ee MERS Coronavirus oo isna 2012-kii ay u dhinteen 858 qofood ayaa waxaa ku jiray dhowr carruur ah oo qura.